Akhriso: Madaxda DF iyo maamul goboleedyada oo ka heshiiyay qodobadii ugu adkaa - Caasimada Online
Home Warar Akhriso: Madaxda DF iyo maamul goboleedyada oo ka heshiiyay qodobadii ugu adkaa
Akhriso: Madaxda DF iyo maamul goboleedyada oo ka heshiiyay qodobadii ugu adkaa
Muqdisho (Caasimadda Online) – Sida aad wararkeenii hore ku akhrisateen waxaa soo dhamaaday kulankii Magaalada Muqdisho uga socday madaxda Maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe kaasoo socday muddo 8 maalin ah.
Kulankaan ayaa ugu dambeyn maanta la isku afgartay qodobadii la isku fahmi la’aa muddadii uu socday Kulankaas.
Goor dhow ayaa waxaa soo dhammaatay munaasabadii lagu saxiixay heshiiskaas, waxaana xafladaas khudbado ka jeediyey Madaxweyne Soomaaliya, Ra’isulwasaare Kheyre, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho iyo Cabdiweli gaas oo ah Guddoomiyaha Golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.
Markii ay khudbahada dhamaadeen waxaa qodobada shirkaas kasoo baxay akhriyey Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Cabdi Faarax Saciid Juxa.
Wax yar kadib la soco war murtiyeedka oo dhameystiran: